Lectrosonics Releases the ALP690 High Performance UHF LPDA Antenna with Built-in RF Amplifier XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show XCHARX NAB Show LIVE
Home » သတင်း » Lectrosonics Built-in RF Amplifier အတူ ALP690 အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF LPDA အင်တင်နာဦးလွတ်မြောက်
Lectrosonics Built-in RF Amplifier အတူ ALP690 အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF LPDA အင်တင်နာဦးလွတ်မြောက်
ရီယိုချို, မိုင် (ဇန်နဝါရီလ 8, 2019) - Lectrosonics is pleased to announce the release of the ALP690,ahigh-performance UHF LPDA (log periodic dipole array) antenna with built-in RF amplifier, for use with wireless microphone receivers or base station transmitters in location and studio production. The new antenna design delivers +4 dBd of passive gain inadirectional pattern to extend operating range, and an RF amplifier can be engaged to supply gain for overcoming signal loss in long coaxial cable runs.
RF amplifier gain, filter bandwidth and display brightness are adjusted withamembrane switch keypad and LED display on the control panel. RF gain is adjustable in 1 dB steps from -6 dB to +12 dB to match the RF loss depending on the type and length of ဟများထံသွားရောက်ကာ cable in use. When used as an active antenna, the filter bandwidth is adjustable from 470 MHz at the lower end to either 608 or 700 MHz at the top end, to serve users’ needs in various markets and locations. Vertical orientation providesawide horizontal coverage pattern.
Chykeria Thompson ကလက်မှုပညာ Lectrosonics အတူ High-ကြိမ်နှုန်းအလုပ်ရှာဖွေရေး - မတ်လ 12, 2019
Lectrosonics အဆိုပါ DCHT အိတ်ဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတီရီယို transmitter မိတ်ဆက် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2019
ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှောလောရင့်ယင်းမက်ဒေါ်နယ်မလေးရှားကင်ပိန်းဖို့အကြပ်အတည်းကိုယူခဲ့ဖို့ Lectrosonics အသုံးပြု - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-01-08
ယခင်: NAMM 2019 မှာတင်ဆက် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် (နှင့်အသေးဆုံး) မိုက္ကရိုဖုန်းစီးရီး
နောက်တစ်ခု: Convergence အိန္ဒိယ 2019 မှာသဟဇာတ OTT, SaaS နှင့် UHD Solutions နှင့်အတူဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့် Service Providers Gain ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဧပြီလ 2019 (417) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)